Ellicott Dredge dia manampy amin'ny fanatsarana ny fivezivezena Marina - Dredges Ellicott
Manampy amin'ny fanatsarana ny fivezivezena marina i Ellicott Dredge
Desambra 2, 2020
Fomba fanao Ellicott Fantsona tohatra mihazona 360SL ampiasaina amin'ny tetikasa seranan-tsambo kely sy marina marobe any Oregon. Ireo tetikasam-pitrandrahana, tantanan'ny Oregon International Port of Coos Bay, dia hanatsara ny fitetezana ao amin'ny Charleston Marina Complex.
Ny fandavahana dia atao eo akaikin'ny Point Adams Facility sy ny tohodrano solika Russell Marine. Ny asa dia hiantohana ny fahazoana miditra amin'ny sambo mpiompy jono sy fialamboly ary antenaina hitohy hatramin'ny Desambra.
Novidian'ny State of Oregon ity trano fisakafoanana ity tamin'ny 2015 mba hampiasain'ny vondron'olona amorontsiraka maro. Ellicott Dredges 'Rick Leverty, mpitantana ny serivisy zokiolona, ​​dia nilaza fa ireo tompon'andraikitra amin'ny mpandraharaha sy ny fikojakojana dia faly amin'ny 360SL mahazatra.
Ny dredge an'ny Series 360SL Swinging Dragon dia dredge tohatra azo alefa izay natao hiasa amin'ny fantsona tery sy tetikasa kely. Ity dredge marobe ity dia mety amin'ny tetik'asa famerenana amin'ny laoniny izay misy marinas, farihy, ary tetikasa fanadinadinana tontolo iainana marefo.
Loharano: Ellicott Dredge, Dredgingtoday.com
Atombohy amin'ny Ellicott ny tetik'asa fananganana vovo-drongony